Nkebi nke 1 Nzọụkwụ Mbara Igwe Solar Panel Ntinye Ọzụzụ Maka Ndị Malitere - Kimroy Bailey Group
23Ka Nwere ike 23, 2020
Na usoro nke Mpụ a site na Nzọụkwụ Solar nke Mahadum Trot Bailey kwere omume, Kimroy Bailey na-enye ntuzi aka zuru oke banyere otu esi etinye ntọala panti na mbara igwe maka ndị mbido. Soro, vidiyo a kpuchitere usoro niile etinyere iji wụnye panti 12 na mbara igwe n’elu ụlọ gị. Vidiyo ahụ kwupụtara otu esi etinye okporo ụzọ aluminom, otu esi eji etiti na njedebe njedebe, na-akọwapụta ngwaọrụ ndị achọrọ iji rụọ ọrụ ngwa ngwa na ọrụ aka. Maka usoro zuru ezu iji wụnye sistemu nke anyanwụ zuru oke ị nwere ike ịzụta Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe Ntanetị ịntanetị nke na-enye Ọkachamara aka na-ejide vidiyo dị elu na ihe mmụta iji duzie gị site na mbido imecha na ịwụnye sistemu mbara igwe zuru ezu.
Pịa bọtịnụ egwu dị n'elu ka ị lelee Nkebi nke 1 nke Nzọụkwụ site na Nkụzi Solar n'ịntanetị ọzụzụ.
Tebụl vidio maka akwụkwọ ntuziaka zuru oke na Otu esi etinye Wụnye Solar panels na Rooftop for Beginners
1:48 - Ihe omuma banyere ogwe ihe nke uwa. Ndozi - 250W abụghị 250kW (Ekele dịrị David James)
2:04 - 8 awa kwa ụbọchị x 3kW (ike zuru oke) = 24kWh / ụbọchị abụghị 12kWh Nke a bụ ntuziaka maka ụfọdụ isiokwu ekpuchiri na Stepkwụ na bykwụ Solar Video 1 si Kimroy Bailey Group.
00:18 - Gịnị bụ ngwa nke ikike nke 3,000W Solar System Power
1:48 - Ihe omuma banyere ikike ogugu nke mbara igwe na ikike nke Sistem
2: 15 - ilszọ Aluminom - A na-eji ihe ndị a eme ihe iji hụ na anwụ na-acha uhie uhie n’elu ụlọ ahụ
3:07 - End na Mid Claps - A na-eji ihe ndị a eme ka oghere ikuku dị na mbara igwe Aluminom.
3: 39 - Iji Ngwaọrụ Ike na Allen Igwe iji wụnye panti gị n’oge nrụnye
4:05 - Nchekwa nwụnye nchekwa anwụ
4:20 - GHARA HH YOURR 5 01:XNUMX - Arụla OZI ỌR.
5:38 - Irụ ọrụ na mmiri
6:34 - Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wuchaa nwụnye ọkụ
7:05 - Njikọ Igwe ọkụ Igwe nke Anyanwụ: Njikọ Usoro, Njikọ Yiri, na Njikọ-Ndekota.
8: 45 - Ngwá ọrụ nchekwa maka nrụnye nke anyanwụ na ngwaọrụ ndị ọzọ achọrọ maka onye mbido iji wụnye usoro ọrụ ọkụ.
9: 33 - Ijikwa Mid-clamps na Allen Key
9:58 - Anyanwụ Anyanwụ na Oké Ifufe / Ajọ Ifufe
10:43 - Gbaa mbọ hụ na wires eletrik gị na-eche ihu n’elu.
11: 49 - Emechara arụnja anọ nke mbụ (1kW nke arụnyere ike)
12:18 - Ijikọ wires elektrọniki na mbụ 4 pan (1kW dechara).
12:46 - Otu esi eme njikọ nke dị n’etiti Mbara Igwe, Akwụkwọ Mmalite
12:58 - Otu esi eme njikọ Njikọ n’oge Solar Installer Training for Beginner
13:55 - Bido n’ahịrị nke abụọ nke nwụnye klọọkụ anyanwụ
14: 15 - njedebe nke abụọ na etiti na - esochi usoro ntinye nke anwụ
15:44 - Usoro Ntụgharị Igwe nke Anyanwụ: Enwere ike 1 anyanwụ na - enye ike friji?
17:33 - Gịnị gụnyere na Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe
19:00 - Solar Panel dị arọ
20:43 - Prekwadebe ngwaọrụ gị na arụmọrụ arụmọrụ ya
21:17 - Branmalite Alaka nke Atọ nke a ga - ejikọta ya na ngalaba abụọ ndị ọzọ.
22:11 - Otu esi eme nwụnye Solar mgbe ịnwechaghị oghere n’elu ụlọ
22:25 - Ntụzi-aka na akụkụ nke a ga-eche ihu maka mbara igwe n'oge nrụnye.
Nchekwa Nchekwa Nchekwa Njem anyị egeela ntị na nzaghachi gị ma anyị maara nchekwa dị oke mkpa na nrụnye nke anyanwụ. Anyị na-ekweta na nke a abụghị vidiyo nrụnye kachasị maka ịwụnye anwụ. Ọ bụ ezie na ekwuputara ndụmọdụ nchekwa banyere ọma na 4:02 na 4:20 dịka PPE na Harnesses. Zighachiri obi ike na Stepkwụ na bykwụ Solar n'ịntanetị ụzọ nwere isiakwụkwọ zuru oke maka OSHA na Solar Safety Standards.
Bido inweta taa site na igwe ọrụ igwe klọbasị puku ijeri dọla. Soro na TeamKB, bido mbube ahia nke anwu n’igwe ma obu wepu ulo gi ma wulite otutu gi. Kimroy Bailey Group bụ ụlọ ọrụ ijeri kwuru ijeri dollar na nnukwu mmekọrịta mmekọrịta ụwa, Ọpụpụ Usoro Azụmaahịa, Ndụmọdụ, na Developmentlọ ọrụ Mmemme Software maka enelọ Ọrụ Mmepụta Robotics ene.
Otu Kimroy Bailey Group na ejikọtara ọnụ nke Ngwọta Ike Ọhụụ na Robotics na Artificial Intelligence. Nzọụkwụ Sun zụrụ azụ ihe karịrị nde ụmụ akwụkwọ 18 si mba 92 na asụsụ 23 dị iche iche. Ndị otu KB nwere ụlọ ọrụ ụwa niile dị 25 gụnyere Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, na Miami. Kpoo anyi na [Email na-echebe] ma ọ bụ 24/7 Global WhatsApWhatsApp
The Kimroy Bailey Group nke ụlọ ọrụ: KB Robotics, KB Renewables, and the KB Foundation, Mahadum Trott Bailey, Oasis Videos site na Trott Bailey Family, na ndị enyemaka niile bụ ndị otu nke ụlọ ọrụ Trott Bailey Family Group nke ụlọ ọrụ nke Kimroy, nwunye ya nwanyị mara mma Sherika na nwa ha mara mma, Keilah Trott Bailey. Ndị Baileys ji nganga kwere na Popsie (Chineke) na ike nke Ọbara Jizọs Kraịst 🏆. Ihe mgbaru ọsọ anyị dị mfe bụ inyere gị aka, irite ma baa ọgaranya site na uto zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ anyanwụ. Maka ezinụlọ gị, onwe gị, azụmahịa gị! #StepByStepSolar #WorldTour #TrottBaileyUniversity http://KimroyBailey.com #RenewableIsRELIABLE this is TeamKB Ka anyị #KeepBelieving!
Iji budata faịlụ usoro sistemụ na-akwado anyanwụ yana akwụkwọ PDF jikọtara maka usoro a nke Stepkwụ na bykwụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe Pịa ebe a iji mepụta akaụntụ n'efu na Trott Bailey University wee mepee Ntụziaka nrụnye zuru oke.
Mahadum Trott Bailey -Eme otutu-Billionaires💰 otutu
Debanye aha na FULL ☀🔋Step site na Stepkwụ Solar n'ịntanetị maka naanị US $ 1,818 / Free Course Trial.
Otu ụlọ ọrụ Kimroy Bailey nwere nke zuru oke Ihe ngwugwu nke anyanwụ maka Ulo, tlọ oriri na ọtụ ,ụ, Hotel ma ọ bụ azụmahịa chazụta Nzọụkwụ ahụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe wee gaa site na onye mbido ka ọ bụrụ ọkachamara nke ụgwọ anyanwụ ma wụnye anyanwụ na ntụkwasị obi.
Ngwọta PetroCaribe: Integbakwunye mmeghari ohuru na Caribbean
Onye isi ala nke Venezuelan mbụ Mr. Hugo Chávez Ọnwụ ọnwụ nke Onye isi ala Venezuelan Maazị Hugo Chávez akpalitela nchegbu na n'ofe Caribbean ... GỤKWUO
Finalbọchị Ikpeazụ na Mgbakọ Mba Nile Maka Ọha Mmadụ
Ọgbakọ IEEE Global Humanitarian Conference 2012 bụ nke dị obere GỤKWUO
HOT102Fm Ajụjụ ọnụ na Prime Minister Awardees
Na Tuesday Eprel 2, 2012, a kpọrọ m òkù ka m sonye na otu ndị isi Mịnịsta Awardees nke Prime Minister ka ha kparịta… GỤKWUO
Getaway dị ọcha na Jamaica Motor Car Show
Edepụtaghachiri Post a site na Jamaica Observer, Fraịdee Jenụwarị 25, 2012. Enwere ike ịchọta ederede mbụ site na ịpị… GỤKWUO
Anyanwụ anyanwụ maka obere azụmahịa iji zere ike ọkụ
I nwere ike iche n’echiche otu ụbọchị na ọkara na-enweghị ike eletrik. N’ime ime obodo anyi enwere otutu… GỤKWUO
Nmepụta Injinịa na Primary & Secondary School
Digital Yard Foundation, na mmekorita ya na Mahadum Nkà na ụzụ, Jamaica (UTech) ga-eme nnọkọ nkwalite mbụ nke Robotics na… GỤKWUO
Nnamdi Mịnịsta ndi ntorobịa
E si na Jamaica Observer pụta ụbọchị Machị 14, 2013. Edepụtara akwụkwọ a n'akwụkwọ m… GỤKWUO
Ọhụụ Ahụ Ike Anyị zuru ụwa ọnụ Global nwere ike ịnwe ikuku? Nwere ike ịzụta ya? Ọ na-akụ naanị na mba họrọ? ... GỤKWUO
UTech IEEE Branch Student
Mahadum Nkà na ụzụ, Jamaica Institute of Electric na Electronics Injinia (IEEE) Alaka ụmụ akwụkwọ gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya na ... GỤKWUO